Wotuu Wɔn Ho Mae Koraa—Wɔ Turkey
Hwehwɛ Ahonyade a Ɛnsɛe Da
“Mo ne Wɔn a Wosu Nsu”
“Munyi Yah Ayɛ”—Adɛn Ntia?
“Ɔmma Wo Tirimbɔ Nyinaa Mmra Mu”
Ko Tia Satan Nnaadaa!
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | July 2017
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
ASOMAFO no bere so no, Kristofo yɛɛ nea wobetumi biara kaa “ahenni ho asɛmpa” no kyerɛɛ nnipa pii. (Mat. 24:14) Ebinom mpo tutuu akwan kɔɔ aman foforo so. Yɛhwɛ ɔsomafo Paulo sei a, ɔkɔɔ baabi a ɛnnɛ wɔfrɛ hɔ Turkey kɔkaa asɛmpa no. Bere a ɔreyɛ asɛmpatrɛw adwuma no, ɔkaa asɛmpa no wɔ hɔ paa. * Bɛyɛ mfe 2,000 akyi wɔ afe 2014 no, wɔyɛɛ ɔsatu titiriw bi wɔ Turkey na wɔsan kaa asɛmpa no kyerɛɛ nnipa pii wɔ hɔ. Adɛn nti na wɔyɛɛ ɔsatu yi? Henanom na wɔyɛɛ bi?
“DƐN NA ƐREKƆ SO?”
Turkey man no mu nnipa yɛ ɔpepem 79, nanso adawurubɔfo bɛboro 2,800 pɛ na wɔwɔ hɔ. Wei kyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ ɔdawurubɔfo biara ka asɛmpa no kyerɛ nnipa 28,000 wɔ Turkey. Wohwɛ a wutumi hu sɛ nnipa kakraa bi pɛ na adawurubɔfo no atumi aka asɛmpa no akyerɛ wɔn wɔ ɔman no mu. Nea enti a wɔyɛɛ ɔsatu no ne sɛ, na wɔpɛ sɛ wɔde bere tiaa bi ka asɛmpa no kyerɛ nnipa pii. Anuanom mmea ne mmarima bɛyɛ 550 a wɔka Turkey kasa tuu kwan fii aman foforo so kɔɔ Turkey kɔboaa ɔsatu no. Wɔne anuanom a wɔwɔ Turkey no boom kaa asɛmpa no. Dɛn na efii mu bae?
Wodii nnipa pii adanse. Asafo bi a ɛwɔ Istanbul kyerɛwee sɛ: “Bere a nkurɔfo huu yɛn no, wobisae sɛ: ‘Adɛn, moreyɛ nhyiam titiriw bi wɔ ha anaa? Baabi a yɛbɛfa biara, yehyia Yehowa Adansefo!’” Asafo bi a ɛwɔ Izmir bɔɔ amanneɛ sɛ: “Ná ɔbarima bi yɛ adwuma wɔ baabi a wɔfa taksi. Obisaa yɛn mpanyimfo no baako sɛ: ‘Dɛn na ɛrekɔ so? Moapagyaw mo adwuma no mu anaa?’” Nkurɔfo hui sɛ wɔreyɛ ɔsatu wɔ hɔ ampa.
Anuanom a wofi amannɔne no ani gyee asɛnka adwuma no ho paa. Steffen yɛ onua bi a ofi Denmark, na ɔka sɛ: “Da biara, na mitumi ka asɛmpa no kyerɛ nnipa a wɔntee Yehowa ho asɛm da. Metee nka sɛ, na mereboa nkurɔfo ma wɔahu Yehowa din.” Jean-David nso fi France, na ɔka sɛ: “Yɛde nnɔnhwerew pii kaa asɛmpa no wɔ borɔn baako pɛ so. Ná ɛyɛ anika sɛ! Ná nnipa dodow no ara nnim Yehowa Adansefo. Ɔpon biara a yɛbɛbɔ mu no, na yetumi ne ofiewura no bɔ nkɔmmɔ, yeyi yɛn video no baako kyerɛ no, na yegyaw no nhoma bi.”
Nnawɔtwe mmienu pɛ mu no, anuanom 550 no maa nhoma bɛyɛ 60,000! Nokwasɛm ni, ɔsatu no ma wodii nnipa pii adanse.
Nsi ne ahokeka a wɔde yɛ asɛnka adwuma no yɛɛ kɛse. Ɔsatu titiriw no kanyan anuanom a wɔwɔ Turkey no. Wɔn mu pii fii ase susuw bere nyinaa som adwuma no ho. Nokwasɛm ne sɛ, bere a wowiee ɔsatu no, abosome 12 a edi hɔ no, wonyaa akwampaefo 82 kaa ho wɔ Turkey.
Anuanom a wofi amannɔne no kae sɛ, bere a wɔsan kɔɔ wɔn man mu mpo no, ɔsatu a wɔyɛe no boaa wɔn maa wɔn asɛnka adwuma tuu mpɔn. Şirin yɛ onuawa bi a ofi Germany. Ɔkyerɛwee sɛ: “Ɛnyɛ den koraa mma anuanom a wɔwɔ Turkey sɛ wobedi adanse bɔnnɔ so. Ɛyɛ a mefɛre sɛ medi adanse bɔnnɔ so. Nanso ɔsatu yi nti mitumi yɛɛ nea anka mintumi nyɛ. Anuanom a wɔwɔ Turkey nhwɛso ne mpaebɔ nso boaa me. Keteke kwan a ɛda asase ase mpo, mekaa asɛmpa no wɔ hɔ maa nkratawa! Seesei deɛ, memfɛre ade sɛ kan no.”
Johannes nso fi Germany. Ɔkae sɛ: “Misuaa nneɛma pii a ɛboaa m’asɛnka adwuma no. Anuanom a wɔwɔ Turkey pɛ paa sɛ wɔka nokware no ho asɛm kyerɛ nnipa dodow biara a wobetumi. Hokwan biara a wobenya no, wɔde ka asɛmpa no. Meyɛɛ m’adwene sɛ mesan kɔ Germany a, mɛyɛ saa ara. Ampa ara nso, seesei meka asɛmpa no kyerɛ nnipa pii sen kan no.”
Zeynep yɛ onuawa a ofi France. Ɔkae sɛ: “Ɔsatu yi aboa ma m’asɛnka adwuma atu mpɔn yiye. Aboa me ma manya akokoduru paa na ama mede me ho to Yehowa so kɛse.”
Adawurubɔfo no ka bɛn wɔn ho paa. Sɛnea anuanom a wofi aman horow so de ɔdɔ ne baakoyɛ yɛɛ adwuma no, wɔn werɛ remfi da. Jean-David a yɛadi kan aka ne ho asɛm no kae sɛ: “Yɛaka anuanom ahɔhoyɛ ‘ahwɛ.’” Ɔsan kae sɛ: “Wɔfaa yɛn sɛ wɔn nnamfo ne wɔn abusuafo. Wogyee yɛn kɔɔ wɔn afie. Ná minim sɛ yɛwɔ anuanom wɔ wiase nyinaa. Ná makan ho asɛm wɔ yɛn nhoma mu mpɛn pii. Nanso afei deɛ, me ara mihuu sɛnea ɛte. M’ani gyei paa sɛ meka Yehowa nkurɔfo ho, na meda Yehowa ase sɛ wama me hokwan a ɛkyɛn so saa.”
Claire nso yɛ onuawa a ofi France. Nea ɔkae ni: “Ɛwom sɛ na yɛn mu bi fi Denmark, France, Germany, ne Turkey deɛ, nanso na yɛn nyinaa ayɛ abusua baako. Wohwɛ a wobɛka sɛ Onyankopɔn de biribi apopa ahye a ɛdeda aman no ntam no.”
Stéphanie a ofi France nso de kaa ho sɛ: “Ɔsatu titiriw no ma yehui sɛ, ɛnyɛ kasa anaa amammerɛ na ɛka yɛn bom, na mmom ɛyɛ ɔdɔ a yɛwɔ ma Yehowa no.”
WƆDA SO ARA RENYA SO MFASO
Anuanom a wofi amannɔne no pii fii ase dwenee ho sɛ wobetu akɔ Turkey na wɔakɔboa adwuma kɛse a ɛwɔ hɔ no. Wɔn mu kakra mpo atu kɔ dedaw. Yɛn ani sɔ saa anuanom no paa.
Nhwɛso bi ni. Adesuakuw ketewa bi wɔ Turkey a emu adawurubɔfo yɛ 25. Mfe pii ni, na ɔpanyin baako pɛ na ɔwɔ hɔ. Afe 2015 no, anuanom nsia tu fii Germany ne Netherlands kɔboaa saa adesuakuw no. Hwɛ sɛnea adesuakuw no mufo ani begye afa!
WƆRESOM WƆ BAABI A MMOA HO HIA
Sɛn na anuanom a wɔakɔtena Turkey reboa ɔsom adwuma no asetena te? Ɛwom, sɛ obi tu ne ho kɔboa wɔ baabi a, ɛtɔ mmere bi a ɛyɛ den, nanso nhyira pii wom. Yɛnhwɛ nea wɔn mu bi aka:
Federico yɛ ɔwarefo; wadi mfe 40 ne kakra. Otu fii Spain kɔboae, na nea ɔka ni: “Esiane sɛ minni honam fam nneɛma pii nti, me ho tɔ me. Ɛma mitumi de m’adwene si nneɛma a ɛho hia paa no so.” Ɔbɛkamfo saa ɔsom adwuma yi akyerɛ afoforo anaa? Ɔka sɛ: “Aane! Sɛ wutu kɔ amannɔne sɛ worekɔboa afoforo ma wɔahu Yehowa a, na wode wo ho rehyɛ Yehowa nsa. Ɛma wuhu paa sɛ Yehowa dwen wo ho.”
Rudy yɛ ɔbarima warefo a ofi Netherlands. Aka kakra ama wanya mfe 60. Ɔkae sɛ: “Yɛn koma atɔ yɛn yam paa sɛ yɛresom wɔ baabi a mmoa ho hia. Ɛyɛ yɛn dɛ sɛ yɛreka nokware no ho asɛm akyerɛ nnipa a wɔntee ho asɛm da. Sɛ nkurɔfo gye nokware no na mihu sɛnea wɔn ani agye no a, ɛyɛ a minhu nea menyɛ me ho koraa.”
Sascha yɛ ɔwarefo a wadi mfe 40 ne kakra. Ɔyɛ onuabarima a ofi Germany. N’anom asɛm ni: “Da biara a mɛkɔ asɛnka no, mihyia nnipa a wɔntee nokware no ho asɛm koraa da. Sɛ meboa saa nkurɔfo no ma wonya hokwan sua Yehowa ho ade a, ɛka me koma paa.”
Atsuko adi bɛyɛ mfe 35. Ɔyɛ ɔbea warefo a ofi Japan. Ɔka sɛ: “Kan no, na me yam a anka Harmagedon aba dedaw. Nanso mekɔɔ Turkey no, ɛyɛ a meda Yehowa ase sɛ wakɔ so anya abotare. Ade rekye a ade resa nyinaa, sɛ mihu sɛnea Yehowa boa ma asɛnka adwuma no kɔ so wɔ wiase baabiara a, ɛka me koma paa ma mebɛn no kɛse.”
Alisa a ofi Russia adi mfe 30 ne kakra. Onuawa no ka sɛ: “Ɔsom adwuma a mereyɛ wɔ ha yi ama maka Yehowa papayɛ nyinaa ahwɛ.” (Dw. 34:8) Ɔka kaa ho sɛ: “Yehowa yɛ m’Agya; ɔsan yɛ m’Adamfo paa. Sɛnea ɔboa me ma meyɛ ɔsom adwuma no wɔ tebea horow mu no ma mihu no yiye. Mehwɛ m’asetena mu a, anigye nko ara; osuahu a ɛka koma, ne nhyira pii kwa!”
‘HWƐ MFUW NO’
Ɔsatu titiriw a wɔyɛe wɔ Turkey no ma wɔkaa asɛmpa no kyerɛɛ nnipa pii. Ne nyinaa akyi no, nsasesin pii wɔ hɔ a asɛmpa no nnuu hɔ. Da biara da anuanom a wɔreboa wɔ Turkey no hyia nnipa a wɔntee Yehowa ho asɛm da. Wopɛ sɛ wokɔboa wɔ saa asasesin no mu anaa? Sɛ saa a, yɛhyɛ wo nkuran sɛ: ‘Ma w’ani so hwɛ mfuw no sɛ ahoa sɛ wotwa.’ (Yoh. 4:35) Wubetumi akɔboa wɔ baabi a mfuw no “ahoa sɛ wotwa” anaa? Ɛnde, fi ase seesei ara tu ho anammɔn na ama woadu saa botae no ho. Anokwa, sɛ woboa ma yɛka asɛmpa no ‘de kɔ asase ano nohoa’ a, nhyira a wubenya deɛ, yɛnka!​—Aso. 1:8.
^ nky. 2 Hwɛ nhomawa a wɔato din ‘Hwɛ Asase Pa No,’ kr. 32-33.
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2017
Wotuu Wɔn Ho Mae Koraa—Wɔ Madagascar
Wotuu Wɔn Ho Mae Koraa
Wotuu Wɔn Ho Mae Koraa—Wɔ Ghana
Wotuu Wɔn Ho Mae Koraa—Wɔ Micronesia